Ra’iisul Wasaare Rooble oo booqday Xarunta Ciidanka Danab ee Balli-doogle – Xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya
Waxaa la qoray January 3, 2021
Ra’iisul Wasaare Rooble oo booqday Xarunta Ciidanka Danab ee Balli-doogle
Balli-doogle, Jannaayo 03, 2021: Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta safar shaqo oo lagu dhiirigelinayo ciidanka Xoogga dalka ku tagey Balli-doogle oo ka tirsan Shabeellaha Hoose, halkaas oo ay ku howl-galaan Ciidanka Kumaandooska Danab Guutada 16.
Ra’iisul Wasaaraha oo xogwareysi la yeeshay ciidanka, ayaa boggaadiyey guulaha la taaban karo ee ciidanka Danab guutadiisa 16-aad ee sida gaarka ah u tababaran ay ka soo hooyeen dagaallada lagula jiro kooxaha argagixisada ah.
Ra’iisul Wasaare Rooble ayaa soo bandhigay muhiimadda ay leedahay dib u habaynta Ciidanka Qalabka Sida oo aas-aas u ah dowladnimada dalkeenna iyo in guul deg-deg ah laga gaaro dagaalka lagaga sifaynayo dalka argagixisada.
“Waxan idin kugu nimid inaan idin xogwareysano oo dhiirigelinayo dadaalkiina ku addan dagaalka aad kula jirtaan cadowga. Maadaama aan hiigsaneyno mustqabalka dhow in ciidamadeennu ay si buuxda ula wareegaan guud ahaan Amniga Qaranka. Iyadoo shaqo aan ka shaqeynayno dhammeystirka hannaanka ciidanka iyo soo celinta xarumahooda, si aan u soo saarno ciidan u diyaarsan hab casri ah oo ay u dhammeystiran yihiin dhammaan agabka, xirfadaha iyo baahiyahooda ciidan.”
Guutada 16-aad ee Danab ayaa sida gaar ah u tababaran, waxayna fulinayaan howlgallo qorshaysan oo lagu beegsanayo ubucda argagixisada, waana ciidan heegan ugu jira sidii ay dalka uga ciribtiri lahaayeen kooxaha banaystay daadinta dhiigga shacabka Soomaaliyeed.
Dowladda Mareykanka ayuu uga mahadceliyey Ra’iisul Wasaaruhu taageerada iyo tababarka joogta ah ee ay la garab taagnayd Ciidanka Danab.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda ayaa tilmaamay guulaha isdaba joogga ah ee Ciidanka Xoogga dalka ay ka gaareen dagaalka ka dhanka ah argagixisada Alshabaab, isagoona bogaadiyey dhabar adeygga, geesinimada iyo sida ay uga go’an tahay Ciidamada Qalabka Sida in ay dalka ka sifeeyaan argagixisadas caadeystay daadinta dhiigga shacabkeenna.
Qormadii HoreHore Ra’iisul Wasaare Rooble “Waxaa xaqiiq ah weerrada fulaynimo ee argagixisada in aysan ka hor istaagayn shacabka iyo dowladda dib u dhiska iyo horumarinta dalka”
Qormada XigtaKu Xiga Ra’iisul Wasaare Rooble oo kulan la qaatay siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur